Waa'ee hidha guddichaa hanga tokko
Waa'ee hidha guddichaa hanga tokko Featured
Ijaarsisaa Bitootessa 24 bara 2003 kan eegalame Hidhi Guddicha Haaromsa Itoophiyaa hirmaannaa ho'aa ummata Itoophiyaa guutuutiin adeemsifamaa jira.
Waggaa torbaffaan ijaarsi hidhichaa itti jalqabame Wiixata darbe qophiilee adda addaatiin Naannoo Beenishaangul Gumuz, Aanaa Guubaatti sirnoota gara garaatiin kabajameera.
Hidha guddina dinagdee biyyattii ni s'ieessa jedhamee abdatame kana kontiraaktarri Xaaliyaanii Saaliinii Impireejiloo hojjetaa kan jiru yoo ta'u, hojiilee makaanikaalii elektiroo ammoo Korporeeshinii Sibiilotaafi Injinariingii Itoophiyaatu raawwataa jira.
Hidhi guddichaa kun oggaa ijaarsisaa xumurame humna elektirkii meegaa waatii kuma jahaafi 450 kan maddisiisu yoo ta'u, maallaqni ijaarsasaatiif barbaachisus qarshii biliyoona 80 (doolaara Ameerikaa biliyoona 4.8)dha.
Hidhichi yunitiiwwan maddisiisa humnaa kan qabu yoo ta'u, tokko tokkoon yuniitii meegaa waatii 375 hanga 400 burqisiisa. Ol ka'inni hidha muummee meetira 145, dheerinni kiiloo meetira 1.8, furdinnisaa gara jalaa meetira 130 yoo ta'u, fiixeensaa ykn kutaan irra keessaa meetira 11. Hidhichi meetir kuubii biliyoona 74, bal'inni iddoo hidhichi qabatu iskuweer kiiloo meetira kuma tokkoofi 680. ijaarsa hidhicharratti hojjettoota kuma sagalii hirmaataa jira. Lammiileen biyyoota 30 keessaa bobba'an 260 qooda fudhataa jiru. Maashinoonni ijaarsaa kuma lamaafi 300 hojicha si'eessaa jiru.
Ijaarsa hidhichaa ammaan tana harka 65 irra gahe kanaaf qarshiin biliyoonni 12.8 ummatarraa waadaa seenameera. Hidhicha hutaaleen hawaasaafi miidiyaaleen alaa hedduun akka daaw'ataniidha ragaan Waajjira Mana Marii Biyyaalessaa Waltaasisaa Hirmaannaa Ummataa Ijaarsa Hidha Guddichaa Itoophiyaarraa argaman kan mul'isani.
Torban kana/This_Week 11794
Torban darbe/This_Month 91631
Guyyaa mara/All_Days 1603589